GameMaker Studio 2: Linux အတွက်ယခုရနိုင်သော 2D Games များအတွက် IDE တစ်ခု Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | | NOTICIAS
ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏအကြောင်းကြား / စူးစမ်းသည် GNU / Linux အတွက်ဂိမ်းများနှင့်အခြားအချိန်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂိမ်းများဖန်တီးရန်ဆော့ဝဲအဖြေများကိုအကြောင်းကြား / စူးစမ်းလေ့ရှိသည်။ ဒီအခွင့်အလမ်းမှာငါတို့ကဒုတိယနဲ့ပတ်သက်လို့အတိအကျပြောမယ် "GameMaker စတူဒီယို".
"GameMaker စတူဒီယို" တန်ဖိုးရှိပြီးကြံ့ခိုင်သည် IDE Gamer 2Dယခုတွင်သုံးနိုင်သည် GNU / Linux များ, တစ်ခု၏ပစ်လွှတ်မှုကြောင့် beta ကိုဗားရှင်း en .deb format၎င်းကို download လုပ်ပြီးစမ်းသပ်ရန်စိတ်ဝင်စားစေသည်။
BennuGD - Cross- ပလက်ဖောင်းဗီဒီယိုဂိမ်းပရိုဂရမ်ဘာသာစကား
1 GameMaker အတွက်အခမဲ့ပွင့်လင်းသောနည်းလမ်းများ
1.2 Godot အင်ဂျင်
1.3 ထိပ်တန်း ၅ - အခြားအခမဲ့၊ ပွင့်လင်းသော၊ အခမဲ့ရွေးချယ်စရာများ
2 GameMaker Studio: 2D ဂိမ်းများဖန်တီးရန်အဆင့်မြင့် IDE တစ်ခု
2.1 GameMaker Studio ဆိုတာဘာလဲ။
2.3 Linux အတွက် Beta ဗားရှင်းအသစ်မှာဘာတွေထူးခြားလဲ
2.4 GameMaker အကြောင်းပိုမို
ထည့်သွင်းစဥ်းစားပါက, "GameMaker စတူဒီယို" ၎င်းသည်အခမဲ့သို့မဟုတ်ပွင့်လင်းသည်မဟုတ်၊ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့အချို့ကိုဖော်ပြမည် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းသောနည်းပညာဖြေရှင်းချက်များ ငါတို့သည်သူတို့၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာ link များနှင့်အတူဤဧရိယာ၌ငါတို့ရှိသမျှကိုကောင်းစွာအသိပေးသည် ရှိပြီးသားအခြားနည်းလမ်းများ ရရှိနိုင်ပါသည် GNU / Linux များ.
“ BennuGD သည် open source video game development language တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သောပရောဂျက်များ၏သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေရန် modular ဒီဇိုင်းအတွေးဖြင့်ဤဘာသာစကားအားအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်လာစေသည်။ BennuGD သည် Windows, Linux နှင့် GP2X Wiz ကိုတရားဝင်သာထောက်ပံ့သည်၊ ဒါပေမယ့်၎င်းကို * BSD, Mac OSX, Android, iOS, Wii (Homebrew), Dingoo A320, GP2X, GP32, PS2 (Homebrew) (သို့) ပထမ Xbox (Homebrew) ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အသံနှင့်ဂရပ်ဖစ်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်ရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးသည်။ GameMaker ကဲ့သို့မလွယ်ကူသော်လည်း၎င်းသည်ဤကဲ့သို့ကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်။ "
"Godot အင်ဂျင် 2D နှင့် 3D ဂိမ်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်ချက်များပေးသော open source နှင့် multiplatform application တစ်ခုဖြစ်သည်။ Godot Engine သည်ဂိမ်းများဖန်တီးခြင်းအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောအစွမ်းထက်သောကိရိယာများကို စုစည်း၍ ဘီးကိုပြန်လည်ပြုပြင်စရာမလိုဘဲ Linux ကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအခွင့်အရေးပေးသည်။ Godot Engine source code ကိုကြည့်ပြီး cloned လုပ်နိုင်ပါတယ် ဒီမှာ၎င်းကို MIT လိုင်စင်၏အလွန်ခွင့်ပြုထားသောစည်းကမ်းချက်များအောက်တွင်ရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးသင်မည်သည့်အခကြေးငွေအမျိုးအစားမှမလိုအပ်ပါ။"
Godot Engine ဖြင့် Linux တွင်ဂိမ်းများတည်ဆောက်ခြင်း
Godot 4.0: ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်ကဆက်ပြီးတိုးတက်နေတယ်
ထိပ်တန်း ၅ - အခြားအခမဲ့၊ ပွင့်လင်းသော၊ အခမဲ့ရွေးချယ်စရာများ
GameMaker Studio: 2D ဂိမ်းများဖန်တီးရန်အဆင့်မြင့် IDE တစ်ခု
GameMaker Studio ဆိုတာဘာလဲ။
၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အရသိရသည် "Gamemaker စတူဒီယို" ၎င်းကိုအကျဉ်းအားဖြင့်ဖော်ပြသည်။
"GameMaker Studio2သည်ဂိမ်းများဖန်တီးခြင်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ကိရိယာများအစုံအလင်ပါ ၀ င်ပြီး Windows, Mac, Linux, Android, iOS, HTML5, Xbox, PlayStation နှင့် Nintendo Switch အတွက်ဂိမ်းများကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့် platform သို့မဆိုဂိမ်းတစ်ခုဖန်တီးရန်နှင့်တင်ပို့ရန်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။"
၎င်း၏ယေဘုယျလက္ခဏာများ (သို့) လက်ရှိလုပ်ဆောင်ချက်များအနက်အောက်ပါတို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည်။
cross-platform workflow ကိုဖွင့်ပေးသည်: ၎င်းသည် Windows, MacOS နှင့်ယခု Linux တွင်ဂိမ်းများကိုဖွံ့ဖြိုးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့ပြင်၎င်းသည် Windows, MacOS, Ubuntu, Android, iOS, tvOS, fireTV, Android TV, Microsoft UWP, HTML5, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One နှင့် Xbox Series X တို့ကို desktop ပေါ်သို့တိုက်ရိုက်တင်ပို့နိုင်သောဂိမ်းများကိုတင်ပို့ခွင့်ပြုသည်။ ၎။
ဂိမ်းများဖန်တီးရန်ကူညီပေးသည်: Drag and Drop (DnD called) ဟုခေါ်သော၎င်း၏နည်းပညာကိုကျေးဇူးတင်သောအားဖြင့်သင်မည်သည့်ကုဒ်ကိုမှတိုးတက်ရန်မလိုသောကြောင့် code element များကို drag and drop ဖြင့်ဂိမ်းများကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။ သို့ရာတွင်၎င်းသည် C programming language ကိုအခြေခံသော GML ဟုခေါ်သောမူပိုင် programming language တစ်ခုအားခွင့်ပြုသည်။
သူ့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့အခန်းအယ်ဒီတာရှိတယ်ဥပမာများစွာသောအရာတို့တွင်စင်မြင့်၌အရာဝတ္ထုများကိုမှာယူနိုင်ရန်နှင့် "sprites" ကိုအရာဝတ္ထုမလိုဘဲတိုက်ရိုက်ဆွဲနိုင်စေရန်ဥပမာကောင်းသောအရာများနှင့်ကင်မရာထိန်းချုပ်မှုများကိုပေးသည်။
၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ပတ်သက်သောအသိပညာကိုချဲ့ထွင်ရန်သင်ဤသို့သွားနိုင်သည် link ကို.
Linux အတွက် Beta ဗားရှင်းအသစ်မှာဘာတွေထူးခြားလဲ
သူ့နေစဉ် လက်ရှိတည်ငြိမ်သောဗားရှင်း Windows နှင့် MacOS အတွက်ရနိုင်သည် အရေအတွက်အား 2.3.3, အ လက်ရှိ beta ဗားရှင်း Linux အတွက်ရနိုင်သောအရာနှင့်အတူပါလာသည် အရေအတွက်အား 2.3.4မရ။ ၎င်း၏ developer များကဤ beta version အကြောင်းအောက်ပါအစီရင်ခံသည်။
"၎င်းသည်ငွေစက္ကူ၏အရွယ်အစားကြောင့်သေးငယ်သည့်ဗားရှင်းဖြစ်ပုံရသော်လည်းဗားရှင်း ၂.၃.၃ မှစ၍ IDE တွင်အပြောင်းအလဲများစွာရှိသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ၊ ၎င်းသည်အလွန်စောသော beta ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အချို့သောပြဿနာများနှင့်ချို့ယွင်းချက်များကိုသတိပြုမိပြီးသားဖြစ်သည်။"
အဆိုပါအကြား အမှားများ ဖော်ပြထားသောအချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
စီမံကိန်း cache ကိုသန့်ရှင်းရေးမအောင်မြင်နိုင်ပါ။
မည်သည့်စာကိုမဆို ၇ ကြိမ်သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုကူးလျှင် IDE သည်ဆွဲထားသည်။
ယခုအချိန်တွင်ဂိမ်းများကို Ubuntu အတွက်သာ (အခြားပလက်ဖောင်းများအတွက်မဟုတ်) တည်ဆောက်နိုင်သည်။
အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက Linux အတွက်လက်ရှိ beta version သင်အောက်ပါစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ် link ကို.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက "GameMaker စတူဒီယို" အောက်ပါ link များကိုတိုက်ရိုက်စူးစမ်းနိုင်ပါသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက် 2D ဂိမ်းများဖန်တီးခြင်း (ဖွံ့ဖြိုးဆဲ) နှင့် ပတ်သက်၍ မြင်နိုင်သည် အခြား Operating Systems များ အခြေခံ GNU / Linux များအလွန်အသုံးဝင်သော native နှင့် multiplatform နည်းပညာဖြေရှင်းနည်းများရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည် (Windows နှင့် MacOS)သိပြီးသားအတိုင်းပါပဲ "BennuGD နှင့် Godot အင်ဂျင်" အခြားများစွာတို့တွင်အခမဲ့၊ ပွင့်လင်းပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့သော်နေရာတိုင်း၌ကဲ့သို့ဖြစ်သည် Linux ဆော့ဖ်ဝဲ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်စီးပွားဖြစ်၊ မူပိုင်ခွင့်နှင့်ပိတ်ထားသောအခြားရွေးချယ်စရာများပေါ်ပေါက်လာသည် "Gamemaker စတူဒီယို" ၎င်းသည်တန်ဖိုးရှိပြီးကြံ့ခိုင်သည် IDE Gamer 2D၎င်းကို GNU / Linux တွင်သုံးနိုင်သည်၊ ၎င်းကို download လုပ်ပြီးစမ်းသပ်ရန်စိတ်ဝင်စားစေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » NOTICIAS » GameMaker Studio 2: Linux အတွက်ယခုရနိုင်သော 2D Games များအတွက် IDE တစ်ခု
TradingView Desktop: ဒီ DeFi app ကို GNU / Linux တွင်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။